इटहरीका उपभोक्ताले खरिद गरेको टेस्टि टेस्टि बिस्कुटमा तार - Saptakoshionline
इटहरीका उपभोक्ताले खरिद गरेको टेस्टि टेस्टि बिस्कुटमा तार
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १७, २०७५ समय: १३:०४:५०
इटहरी । तपाईले बजारबाट किनेर ल्याएको कुनै खाद्यवस्तुमा अखाद्यवस्तु भेटिएमा के गर्नु हुन्छ ? हो तपाई हामीले त्यस्तो कल्पना पनि गरेको हुदैन । तर इटहरीका एक जना उपभोक्ताले खरिद गरेको क्वालिटि फुडद्धारा उत्पादन भएको टेस्टि टेस्टि बिस्कुटमा तार भेटिएको छ ।
इटहरीको बजारबाट खरिद गरि ल्याएको बिस्कुटमा तार भेटिएपछि उन्ले सञ्चारकर्मीलाई देखाउदै उत्पादकले उपभोक्ताको स्वास्थ्य माथी खेलबाड गरेको आरोप लगाएका छन् । काब्रा ग्रुपको क्वालिटि फुड कम्पनि दुहवी सुनसरी द्धारा उत्पादन भएको बिस्कुटमा लापारवाहि भएको हो ।
उपभोक्ताको रोजाइमा परेको बिस्कुटमा अखाद्यवस्तु भेटिनु नराम्रो भएको र फ्याट्रिले लापरवाहि गरेको इटहरी २ निवासि उमेश बानियाँले बताए । स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असरपर्ने गरि बिस्कुटमा तार भेटिनु र उत्पादकहरुले ध्याननदिनु कतिको जायज हो त ? भनेर कम्पनिका म्यानेजर दिपक थापालाई प्रश्न गर्दा उनि भन्छन् “ कम्पनिमा कुनै तारको काम हुदैन त्यसैले बिस्कुटमा तार हुनै सक्दैन” । यस्ता ठुलाठुला कम्पनिहरुले गर्ने लापरवाहिको कारण उपभोक्तको स्वास्थ्यमा खेलबाड को छ ।